eProperty Nepal मा एजेन्ट सम्बन्धित जानकारी
एजेन्ट बन्न कसका लागि उचित छ?
यदि तपाईं घर जग्गा कारोबार गर्दै आउनुभएको छ र जुनसुकै समयमा ४-५ वटा प्रोपर्टी बिक्री गर्ने क्षमता छ भने यो subscription तपाईंको लागि उचित हुन सक्नेछ ।
एजेन्ट हुनका लागि के के प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ?
यदि तपाईं eProperty Nepal मा एजेन्ट बन्न चाहनु हुन्छ भने हाम्रो फेसबुक पेजमा आफ्नो सम्पर्क नम्बर दिएर खबर गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सिधै हाम्रो वेबसाइटमा Sign Up गरि आफै रजिस्टर गर्नसक्नुहुन्छ (यो भिडियोको सहायता लिनु होला ePropertyNepalमा एजेन्ट बन्ने सुनौलो अवसर VIDEO )
एजेन्ट हुनका लागि शुल्क कति तिर्नु पर्छ?
eProperty Nepal मा एजेन्ट Subscription चार्ज मासिक रुपमा रु. १०,०००/- तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस अन्तर्गत तपाईंले एक महिना भित्र ५ ओटा featured listing गर्न पाउनु हुनेछ।
Featured Listing भनेको के हो र यसका फाइदा के के छन्?
Featured Listing भनेको त्यस प्रकारको लिस्टिङ्ग हो जसमा हामीले कुनै प्रोपर्टी eProperty Nepal को वेबसाइटका साथ साथै हाम्रो फेसबुक पेज(१,५०,००० + लाइक भएको) दुवैमा शेयर गर्छौं ।
यसका फाइदा तपाईं घर बसी बसी १,५०,०००+ जनालाइ आफ्नो प्रोपर्टीको बिज्ञापन गर्न सक्नुहुन्छ ।
एजेन्ट बनेर के फाइदा हुन्छ?
eProperty Nepal मा प्रति Featured listing चार्ज रु. ३,०००/- लाग्छ । हाम्रा एजेन्टहरुले ५ ओटा लिस्टिङ्ग जम्मा १०,००० मै गर्न सक्नुहुन्छ । एउटा साधारण ग्राहकले यस प्रकारको लिस्टिङ्गलाइ रु. १५,०००/- तिर्नु पर्छ ।
असिमित फ्री लिस्टिङ्गहरु
लिस्टिङ्ग गरिएको प्रोपर्टीको समयावधि असिमित रहने छ
तपाईंको प्रोफाइल अन्तर्गत रहेका सबै लिस्टिङ्गहरु (Normal + Featured) सबैले देख्न पाउनुहुनेछ
एजेन्टले लिस्ट गरेका प्रोपर्टी हाम्रो वेबसाइटमा feature का रुपमा देखिने छन्
भविस्यमा कुनै थप लिस्टिङ्ग गर्न परेमा बिशेष छुट प्रदान गरिने छ
एजेन्टले बिज्ञापन गरेबापत कति कमाउन सक्छ?
एजेन्टको कमाइको कुनै सिमा हुदैन । यदि तपाईंले ५ ओटा प्रोपर्टी नै बेच्न सफल हुनु भयो भने सो-बिक्रि बाट आएको फाइदा तपाईंको मात्रै हुनेछ । eProperty Nepal लाइ मासिक १०,००० भन्दा एक रुपयाँ पनि बढी तिर्नु पर्ने हुदैन ।
थप जानकारीका लागि 9851204778 मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
No of views: 12246
Published on 15, March 2017 by Nishant Acharya